Papa Louie lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Papa Louie lalao
Aoka ianareo ho kaja mpandraharaha nandritra ny lalao an-tserasera Papa Louie, manampy ny maherifo mba hitantana ny maro baovao: a PIZZERIA, burgernoy, trays amin'ny mafana alika, trano fisakafoanana amin'ny Meksikana nahandro sy mivarotra akoho elatra, sakafo mamy. Ny toeram-piompiana lehibe teo ny asa, ary mba nanana ny voninahitra hilalao ho maimaim-poana, manahy mikasika ny tombony any amin'ny iray amin'ireo ny orinasa. Louis sarobidy sary ary tiany dia afa-po ny mpanjifa. Ary satria mitaky ny andevo sy ny kalitaon'ny hafainganan'ny fanatanterahana ny baiko.
Lalao Papa Louie tamin'ny Category:
Simulations ny fiainana
Ny tsara indrindra Papa Louie lalao
Papa Louie 2: Rehefa Burgers Fanafihana!
Papa Louie 3. Rehefa ny gilasy no manafika!
PIZZERIA Papa Louie
Hot alika Pope Louis
Burgernaya Pope Louis
Papa Louie: ririnina Adventure
Pancake Pope Louis
Ice-fanosotra Papa Louis
Papa Louie: Cafe muffins Papa
Snack Pope Louis
Papa Louie: Fanafihana Pizza
Daddy ny donut
Papa Louie: Adventures ao an-tanàna
Papa ny Bakeria
Papa Louie - alina mihaza
Papa ny Sushiria
Papa Louie: Night Hunt 2
Free Games Papa Louie - dia mampihomehy, mamy, tsara fanahy sy ahalalan-fialam-boly
Lalao Online Rehetra Papa Louie lalao
Next, fa ny antony!
Papa Louie - virtoaly lehibe mpandraharaha, manana plurality ny sakafo karakaraina. Eo ambany ny famantarana ny asa:
trays amin'ny mafana alika
fisotroana kafe tsindrin-tsakafo
Snack ny akoho elany
Free Games Louie Papa isika hanomboka miaraka amin'ny zava-misy fa ny maherifo maka asa any amin'ny iray amin'ireo orinasa na Dada fetsy mandondòna nihazakazaka nikarakara ny toeram-pisakafoanana amin'ny tanora sy mavitrika ny olona, ​​ary tsy maintsy hahafehy fandrahoan-tsakafo sy ny kalitaon'ny mpanjifa. Ny voalohany dia mamela ny vahiny mba hahatakatra ny fitsipiky ny lalao.
Filalaovana ny lalao Papa Louie - ianao ho lasa tompon-dakozia
Games Papa Louie manome toro-hevitra ny fomba mora raisina haka sy mba hanomana ny filaminana. Ohatra, raha maka Fry elatra, mpanjifa dia mangataka isa iray, ary manondro inona no saosy izay tiany izy ireo mba hihinana izay legioma izy ireo tokony mba handamina. Mba tsirairay dia voarakitra amin'ny taratasy manokana izay ianao dia ho afaka hanao ny fampihavanana amin'ny fotoana ny mahandro sakafo. Ireo rehetra ireo dia tanterahina amin'ny dingana filaharany amin'ny faritra samy hafa an-dakozia;
Roasting maka toerana ao amin'ny lalina fryer - eto no mila nataony tao mangotraka toy ny elatra diloilo, araka izay voalaza ao amin'ny filaminana, ary mba hanohana azy ireo ny fotoana, ka dia izy teo tsy soggy fa tsy overdone.
Ary ny hetsika mahatonga any amin'ny Sampan-draharahan'ny ny sauces. Manampy ny mampahatsiro sakafo sy mandany nanome baiko elatra tsara tarehy fa nihozongozona amin'ny sambo manokana, irery, nanaraka ny directional zana-tsipìka.
Rehefa tapitra ny amin'ny hena masaka tokony hatao an-dovia, toerana legioma sy fanampiny zavamanitra. Tena ilaina koa ny manao mazava tsara - elatra, legioma sy ny vilia baolina amin'ny sauces tokony hatao eo amin'ny mitsipitsipika contours aseho eo amin'ny lovia.
Ary rehefa tanteraka ny baiko dia vonona, dia azo atolotra ny mpanjifa.
eo imasonao aho, dia miezaka izy, ary avy eo dia Dinihiny ho toy ny isan-jato. Noho sambatra mpitsidika - ny ambony ny isa sy ny lehibe kokoa ny tendron'ny ravin, izay manan-danja famantarana; raha ny marina dia hiafara any karama mahery fo, ary avy eo dia avy amin'ny vola vidiny maimaim-poana lalao Papa aterineto hamela mba hanatsarana ny fitaovana, mba hividy akanjo vaovao, ataovy fanampiny fanaka mba handravaka ny trano fisakafoanana afisy, hanova ny famolavolana fisoratana anarana. Tsy fotsiny ny lalao ho an'ny zazavavy Papa Louie namorona ny rindrambaiko - misy koa ny ankizilahy sy ny mahafinaritra;
Indraindray misy lalao momba ny Papa ao amin'ny karazan-dahatsoratra tsy mahazatra. Ohatra, ny pizza masaka Papa, dia velona izy ka nanomboka hanafika olona, ​​ary avy eo dia tightened ny Papa ho amin'ny davaka, izay tsy maintsy hiady amin'ny pizzas, biby goavam-be, taming azy ireo ary naka indray ny PIZZERIA. Miaraka amin'ny fandraisana anjara ny Papa Louie ny lalao eo amin'ny toerana avo be foana kalitao sy mahaliana - hankafy azy ireo!